जुली 08 - एलियाको बिश्वास्योग्यता - Elim Glorious Revival Church – Kodambakkam
जुली 08 – एलियाको बिश्वास्योग्यता
No Comments on जुली 08 – एलियाको बिश्वास्योग्यता
“तब त्‍यस विधवाले एलियालाई भनी, “अब मलाई यो थाहा भयो, कि तपाईं परमेश्‍वरका जन हुनुहुँदोरहेछ, र तपाईंको मुखबाट निस्‍केको परमप्रभुको वचन सत्‍य रहेछ।” (१ राजा १७:२४)
कतिपय मानिसहरु आफ्नो गवाही आफै दिन्छन भने कतिपयले अर्काको गवाही दिन्छन। तर कतिपय मानिहरुका बारेमा परमेश्वर स्वयंले गवाही दिनुहुन्छ। एलियाको बारेमा धेरै मनिहरुले उनको बिश्वनियाताको गवाही दिएका छन् र परमेश्वरले पनि गवाही दिनुभएको छ। सारपतकी बिधवा, जो अन्यजाति थिइ, उसले एलियाको बिश्वस्नियाताको बारेमा गवाही दिइ। उसले उनको बारेमा बोल्दै भनि “हे परमेश्वरका जन”, र यो एलियाको बारेमा उसको पहिलो गवाही थियो। उसले भनि “तपाईंको मुखबाट निस्‍केको परमप्रभुको वचन सत्‍य रहेछ।” र यो उसको अर्को गवाही थियो।
अरुले तपाइको बारेमा कस्तो गवाही दिन्छन? तपाइँ अरुलाई दुइवटा आँखाले हेर्नुहुन्छ तर तपाइलाइ अरुले हजारौं आँखाहरुले हेरिरहेका हुन्छन। त्यसरी तपाइलाइ हेरिँदा के तपाइँ परमेश्वरको सन्तान जस्तो देखिनुहुन्छ? के अरुले तपाइको मुखबाट निस्केका वचनहरु सुन्दा ति वचनहरु परमेश्वरबाटको हो र ति वचनहरु सत्य छन् भनेर गवाही दिन्छन?
एलियामा भएको सत्यता के हो? त्यो सत्यता यो हो कि उनि परमेश्वरका जन थिए र उनि परमेश्वरको सामु खडा हुने व्यक्ति थिए। हुन त एलिया पनि हामीजस्तै दुख पाएका साधारण मानिस थिए। तर उनले परमेश्वरलाई पछ्याउदै सबै कुरामा सत्यनिष्ठा हुने अठोट गरेका थिए। हरेक दिन बिहान सबेरै उनि परमेश्वरको सामु उहाँको उपस्थितिमा बस्थे। परमेश्वरको सामु उभिनु भनेको उहाको सेवा गर्नु हो।
उनले आहाबसंग बोलेको पहिलो बचन ध्यान दिएर पढ्नुस त , उनले भने “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्‍वर जसको सेवा म गर्दछु, उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्‍दछु” (१ राजा १७:१) यो उनको परिचय थियो। यो उनको महानता थियो। यो उनको शक्तिको रहस्य थियो। यो उनको बिश्वास्योग्यता थियो।
हरेक दिन परमेश्वरको सामु खडा हुने उनको बानि भएकोले उनि राजा अहाबको सामुन्ने खडा हुन डराएनन्। परमेश्वरको सामु विश्वासयोग्य भइ बसेको कारण उनमा यति आत्मविश्वास थियो कि उनले भने “मेरो वचनविना आगामी केही वर्षहरूभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ।” परमेश्वरको सामु हरेकदिन खडा भएर उहाँको प्रशंसा गर्नुभयो भने तपाइलाइ पनि परमेश्वरले माथि माथि उचाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको सामु हरेक दिन खडा हुनाले तपाइहरुमा डाक्टरहरु र वकिलहरुका सामु नम्र भएर खडा हुनुपर्ने परिस्थिति आइपर्दैन।
एलिशा पनि आफ्नो बारेमा त्यहि भन्छन “सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, जसको सेवा म गर्दछु, (२ राजा ३:१४) गाब्रिएल स्वर्गदुत आफ्नो बारेमा भन्छन “म गब्रिएल हुँ, म परमेश्‍वरको सामुन्‍ने उभिरहन्‍छु” (लुका १:१९) परमेश्वरका प्रिय छोराछोरीहरु, एलियाको बिश्वास्योग्यता यहि हो। एलिशाको सफलताको कारण पनि यहि थियो। गाब्रिएलको गर्वको बिषय पनि यहि थियो। के तपाई पनि परमेश्वरको सामु सत्यता र बिश्वस्योग्यताका साथ् उभिनुहुन्छ?
मनन गर्नका लागि : “म सोझो हृदयसित बोल्‍दैछु, म जे जान्‍दछु मेरो मुखले ईमानदारसित बोल्‍दछ।” (अय्युब ३३:३)